လောကကြီးက မတရားဘူး လို့ဆိုတဲ့ ဦးကျော်သူ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » လောကကြီးက မတရားဘူး လို့ဆိုတဲ့ ဦးကျော်သူ
လောကကြီးက မတရားဘူး လို့ဆိုတဲ့ ဦးကျော်သူ
Posted by အာဂ on Sep 21, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.., Relationships & Family, Society & Lifestyle | 14 comments
(၁) မောင်ရန်လင်း တစ်ယောက် မြောက်ဒဂုံမြို့နယ် နေအိမ်အနီးရှိ ရေအိုင်ထဲတွင် ဆော့ကစားနေသည်။ ငါးကလေးများအား လိုက်လံ ဖမ်းဆီးနေသည်။ ခဏအကြာ “အား” ခနဲ အော်သံနှင့်အတူ ရေအိုင်တစ်ခုလုံး ရဲရဲတောက် နီရဲသွားသည်။ ထိုအခါမှ မိခင်ဖြစ်သူသည် အပြေးအလွှား ရောက်လာကာ မောင်ရန်လင်းအား ပွေ့ချီ၍ ကြည့်ရှုမိတော့သည်။ မောင်ရန်လင်း ခြေဖ၀ါးတစ်ခုလုံး သွေးသံရဲရဲနှင့် ဟက်တက် ကွဲနေသည်ကို တွေ့ရသည်။ ပုလင်းကွဲကြောင့်လား၊ သံပြားကြောင့်လားတော့ မသိ။ နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ရှိ သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်းသို့ ရောက်လာတော့သည်။ ဒေါက်တာ ထူးထူးကျော်နှင့် သုခကုသိုလ်ဖြစ် ဆေးခန်းမှ သူနာပြုဆရာမများက ၀ိုင်းဝန်း၍ ကူညီဖေးမ ကုသပေးတော့သည်။ ကွဲသွားသော ခြေဖ၀ါး မှ ဒဏ်ရာအား ထုံဆေးပေးကာ ဆေးထည့်၍ ချုပ်ပေးလိုက်သည်။ မောင်ရန်လင်း ခမျာ နာကျင်လွန်း၍ ငိုရှာတော့သည်။ အငိုတိတ်အောင် ၀ိုင်းဝန်း၍ ချော့မြူခြင်း၊ Pucci Cake မိသားစုမှ လှူဒါန်းထားသော ဘီစကစ်ထုတ်အား နာရေးကူညီမှုအသင်း(ရန်ကုန်) ဥက္ကဌ ဦးကျော်သူကပေး၍ နာကျင်မှု ဒဏ်ရာ ပျောက်ကင်းအောင် “သတ္တိရှိတဲ့ ယောက်ျားလေးကွ၊ ဗမာ့သွေးကွ” ဟူ၍ အားပေးကာ ချော့မြူ ခဲ့ရသည်။ ဒဏ်ရာကို ချုပ်ပေးအပြီး ပိုးသတ်ဆေး ထိုးပေးကာ ဒေါက်တာ ထူးထူးကျော်နှင့် မောင်ရန်လင်း၏ မိခင်နှင့်အတူ အမှတ်တရ ဓါတ်ပုံရိုက်ကူးပေးခဲ့သည်။
မှတ်ချက် ။ ။ ဦးကျော်သူ ရဲ့ Face book မှကူးယူဖော်ပြပါသည်။
သနားပါတယ်နော် . . . တော်တော်လေးနာမယ်နဲ့တူတယ် . . .
ဒီလောက်တောင်စုတ်ပြတ်နုံချာနေတဲ့ ဘ၀တွေကြည့်ရင်းနဲ့ တကယ် ကိုမျက်ရည်ဝဲမိပါတယ်ဗျာ။
လူသားအားလုံး လူနဲ့တူအောင်နေနှိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းရင်း……………..
တံငါသည်လင်မယားညဖက်ကြီး အိမ်အောက်က ဗွမ်းကနဲအသံအကြား ငါးမှတ်လို့ မှိန်းနဲ့ထိုးပြီးအဖော်မှာ သားကလေးလိမ့်ကျတာဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေး ဖတ်မိတုန်းက တကယ်မဖြစ်နိုင်ဖူးထင်မိတာ၊
ခုလို ဓာတ်ပုံနဲ့တကွ ဆိုတော့
ပုံထဲကအိမ် ကိုလည်းကြည့်ကြပါအုံးဗျာ…ပထမစာဖတ်နေတုံး မိဘနှစ်ပါးကိုအပြစ်မြင်လိုက်သေးတယ်..
ဆင်းရဲတာတွေ အပြင်မှာ ရှိရင်ရှိမယ် ဗွီဒီယိုထဲမှာ မရှိရဘူး ဆိုတဲ့ ၀ိုင်း ရဲ့အတွေးလေးကိုတောင် သတိရတယ်
သနားပါတယ် အကုန်လုံး ဆင်းရဲမှုပပျောက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပါစေလို့ မျှော်လင့်ပါတယ်
ကိုအာဂရေ (သို့) ကိုတယောက်သောသူ ရေ
ဆင်းရဲတာနဲ့ ကြမ်းပေါက်ကနေ ကလေးကိုမကျအောင် ဂရုမစိုက်နိုင်ခြင်းဟာသီးခြားပါ။
အဲဒီလိုအပေါက်ရှိလို့ရှိရင် ဘယ်လောက်ဘဲဆင်းရဲပါစေ အတတ်နိုင်ဆုံး ဖာထေးထားရပါမယ်။
ဖြစ်ကတတ်ဆန်း နေတတ်တဲ့ သဘောကို ပြောချင်တာပါ။
ဂျပန်တွေလဲ ဟိုးအရင်ကတော်တော်ကိုဆင်းရဲတာပါ။ (ခုလဲ ဆင်းရဲသူတွေကိုတွေ့နေတုန်းပါဘဲ။)
ဆင်းရဲလို့ ကျောက်တုံးကိုဘဲ လမ်းခင်းထားပေမဲ့ ညီနေအောင်၊သွားလို့ကောင်းအောင်၊ကြည့်လို့
ကောင်းအောင် သပ်သပ်ရပ်ရပ်လေး လုပ်ထားပါတယ်၊အဲဒါ ဆင်းရဲတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။
စေ့စပ်သေချာတဲ့ (သို့) လေးလေးစားစားလုပ်တတ်တဲ့ (သို့) ပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့မစားတဲ့ စိတ်ပါ။
အဲဒီ စိတ်ကလေး ရှိရင် ကို အဲဒီကလေးမသေပါဘူး။ သူ့ဟာသူရှောက်ဆော့လို့ ကားတိုက်တာမှ
မဟုတ်တာဗျာ။ ကိုယ်နဲ့တူတူအိပ်နေရဲ့ ကလေးအပေါက်ထဲကျသေရတယ် ဆိုတဲ့
“ဘဝကိုထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်း”အားနဲ တဲ့ လူတွေအဖို့ ဘဝတခုလုံး တိုးတက်အောင် ဘယ်လို စွမ်းမှာလဲ
အာရက္ခသဗ္မိဒါ (ရရှိလာသော ဥစ္စာပစ္စည်းတို့ကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း) ဆိုတာကြီးပွါးရာအကြောင်း
လေးပါးထဲက တခုဆိုတော့ ကိုယ့်သားသမီးလေးကိုတောင်မစောင့်ရှောက်နိုင်တာလို့ တွေးမိပါတယ်။
ကိုမောင်ကတော့ သနားစိတ်နဲ့ မိဘရဲ့ ပေါ့ဆမှု လို့အပြစ်တင်လို့မရဆိုပေမဲ့
ဖြစ်သလိုနေတာ(ပေါက်နေတာကိုသူရက်နဲ့ အဲဒီနားမှာ သိပ်တာ) ကတော့ မဟုတ်သေးပါဘူး။
ဆင်းရဲတာနဲ့ ဖြစ်သလိုနေတာ ရောနေတဲ့ အကြောင်းလေးပါ။
ဟုတ်တာပေါ့ ……… စကားတစ်ခုကြားဖူးသေးတယ်…။ ဖြစ်သလိုနေရင် နေသလိုဖြစ်မယ်တဲ့ ဘယ်လောက်အထိမှန်သလဲတော့ မသိဘူး…။ တော်တော်များများက နေသလိုဖြစ်နေတာများတယ်….။
safety ဆိုတဲ့စကားဟာမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့တော်တော်ဝေးနေတာကိုသတိထားမိနေ တာတော်တော်ကြာပါပြီ။ အခုဖြစ်ရပ်မှာလဲ ဆင်းရဲချမ်းသာမဆိုင်ပဲ အတွေးအခေါ်နဲ့ပဲဆိုင်မယ် လို့ထင်ပါတယ်။ ၉ လအရွယ်ကလေးဟာတွားသွားနေပါပြီ။ ဒီကြမ်းပေါက်ကနေအချိန်မရွေးကျ သွား နိုင်တယ်ဆိုတာမိဘတွေသိကိုမသိတာဖြစ်မှာပါ။ ဖြစ်နိုင်ချေဆိုတာထည့်တွက်ဖို့မလိုဘူးလို့ ထင်နေကြတာပါ။ ထည့်တွက်ပြရင်လဲနမိတ်မရှိနမာမရှိဆိုပြီးပယ်ချခံရတတ်ပါတယ်။ ဆင်းရဲလို့မသိတာထက် ပေါ့ပေါ့ဆဆနေ တတ်တဲ့အကျင့်တွေကြောင့်ဖြစ်ရတာပါ။ မဖြစ်လောက်ပါဘူးဆိုတဲ့စကားဟာကံကိုယုံကြည်လွန်း တဲ့ကျွန်မတို့ လူမျိုးရဲ့လက်သုံးစကားပါ။ ဖြစ်လာရင်လဲကိုယ့်ပေါ့ဆမှု့ဆိုတာထက်ကံကိုပုံချတတ် တာလဲအကျင့်လိုဖြစ်နေကြပါပြီ။ ပြုပြင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အချက်တွေပါ။ တော်တော်မလွယ်ပါဘူး။
မစွန့်စားကြလို့၊အမြင်မှန်နဲ့ မရှင်သန်ကြလို့ပါ။ ဆရာကြီးလုပ်တာမဟုတ်ပါဘူး၊ကိုယ်တိုင်လည်းအားနဲနေပါသေးတယ်၊ကျနော်တို့စည်းရုံးကျိုးစား၊ ဖေါက်ထွက်နိုင်ဘို့၊ လူထုအားကို အများကြီးလိုပါသည်။